मेट्रोपछि नयाँ किसिमको सवारी एआरटी कुँदाउने कतारको योजना, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
मेट्रोपछि नयाँ किसिमको सवारी एआरटी कुँदाउने कतारको योजना
काठमाडौँ । छिमेकी देशहरूले लामो समयदेखि लगाएको पूर्ण आर्थिक नाकाबन्दी र हवाई क्षेत्रको प्रतिबन्धका बाबजुद कतार बिल्कुल कमजोर भएकाे छैन । साउदीको कुनै पनि रणनीतिले उसलाई झुकाउन सकेको छैन । नाकाबन्दीकै बीचमा झन् समृद्ध हुँदैछ कतार ।
कतारले अप्ठेरोलाई अवसरमा परिणत गर्ने लोभलाग्दो क्षमता प्रदर्शन गरिरहेको छ । नाकाबन्दीपछि कतारले खाद्य आत्मनिर्भरता, सामाजिक अमन र आर्थिक दिगोपनमा महत्वपूर्ण सुधार मात्र होइन विकास निर्माणमा पनि उक्तिकै फड्को मारिरहेको छ ।जसले अहिले विश्व जगतलाई नै चकित तुल्याएको छ ।
मेट्रो रेल सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिसकेको कतारले अहिले फेरि आफ्नो मुलुकमा एक नयाँ किसिमको सवारी कुँदाउने योजना गरेको छ । देशको सबै ठाउँमा यातायात सेवाको पँहुच पुर्याउन विश्वस्तरीय सवारी एआरटी सञ्चालन गर्ने चाहना राख्दै उसले अहिले त्यसको गृहकार्य गरिरहेको छ ।
कतारको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रलायले जनाएअनुसार यो विद्युतीय सवारीको आउँदो हप्तादेखि दोहादेखि उत्तरमा पर्ने अल–खोरमा परिक्षण गरिने भएको छ ।
अटोमेटिक रेपिड ट्रान्जिट भनिने यो नयाँ किसिमको सार्वजानिक बस र रेलको विशेषताले बनेको हुन्छ । चीनले यसलाई पहिलो पटक सन् २००७ देखि सञ्चालनमा ल्याएको थियो । परिक्षण सफल भएमा यो सवारी सञ्चालनमा ल्याउने कतार सम्भवत विश्वकै दोस्रो राष्ट्र हुने बताइएको छ ।